Indlu esemaphandleni iSeNa - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni iSeNa
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe ongu'Mamolepa
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike u'Mamolepa iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo ethe cwaka, kufutshane nedolophu. Le ndlu isemaphandleni inomoya ofudumeleyo wosapho onezinto eziluncedo. Ehlotyeni iindwendwe zinokonwabela ukuba phandle ngegadi engasemva, nto leyo ebonisa ukuba izinto ziyimfihlo. Ngeenyanga zasebusika indawo yokubasa umlilo kwigumbi lokuhlala ineentsuku ezitofotofo nezifudumeleyo. Igumbi lokuhlambela lifakelwe into eyenza kufudumale xa kusasa ebusika. Ezinye iindawo zifudunyezwa zifudumala ngefowuni.
Le ndlu isemaphandleni inomoya oshushu wosapho onezinto eziluncedo. Ikhitshi lifakelwe umatshini wokuhlamba izitya ibe kukho umatshini wekofu weNespresso! Ungavuka uye kwi-cappuccino emnandi okanye
i-espress. ehlotyeni iindwendwe zinokonwabela ukuba phandle kwigadi engasemva eyenza kubekho izinto eziyimfihlo. Ngeenyanga zasebusika indawo yokubasa umlilo kwigumbi lokuhlala ineentsuku ezifudumeleyo nezifudumeleyo. Igumbi lokuhlambela lifakelwe into eyenza kufudumale, xa kusasa ebusika. Ezinye iindawo zifudunyezwa zifudumala ngefowuni.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi elala abantu ababini neekhabhathi ezithe gabalala. Igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezilala abantu ababini neebhedi ezinkulu ezakhiwe ngaphakathi. Igumbi lokuhlala linekona entle yokuphumla, ukubukela i-tv, ukufunda incwadi okanye wonwabele umlilo. Kwenye indawo kukho idesika apho unokusebenza khona kwi-laptop yakho ngokukhululekileyo. Igumbi lokuhlambela lifakelwe ibhafu, ishawa kunye nendlu yangasese. Umatshini wokuhlamba impahla ukwindawo yakho. Ikhitshi linetafile ehlala abantu abayi-6, inesitovu segesi/esisebenza ngombane esineoveni, i-microwave, umatshini wokuhlamba izitya nezinye izinto ezinokusetyenziswa.
Iveranda yamaplanga inetafile, ibhentshi nezitulo ezimbini ezinemiqamelo. Kukho nezitulo ezongezelelekileyo egadini. Iayini kunye nebhodi yokuayinela nazo ziyafumaneka kwindlu esemaphandleni.
Indawo ethe cwaka, ekhuselekileyo, enye yezona ndawo zindala zaseMaseru. Yindawo esondeleyo nezayo, apho izindlu ezininzi ezindala zithathelw 'indawo zizakhiwo ezintsha, zale mihla. Omnye ufumana imvakalelo yokuba kude nezihlwele eziphithizelayo embindini wedolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- 'Mamolepa
Kukho umntu oza kwamkela iindwendwe aze azilungise aze azibuke iindwendwe ngalo lonke ixesha eziza kulihlala. Uza kufumaneka xa kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maseru